sida gabdhaha jaceyl loogu abuuro? - iftineducation.com
sida gabdhaha jaceyl loogu abuuro?
aadan21 / June 9, 2016
iftineducation.com – Ma jiro nin ama gabar dadaal u galaya in ay bur buriyaan xariirkooda qoyska , dhan waliba waxa uu waqti ku bixiyaa in uu dhiso qoys is haysta balse waxaa jira haween aysan ragga ka maarmin waxa ayna ku soo koobeysaa qeybtaan
Midda Hooyada Ah : ma aha midda kaliya caruurta dhasha , basle waa midda dareeysha caruurteeda dhan waliba , muuqaalkooda , caafimaadkooda iyo wax barashadooda dhab ahaan ragga midda noocan ah waa ay ku dhagaan .
Midda Gurigeeda Joogta : ragga waa ay ka helaan haweeneyda ku adkeysata in ay gurigeeda joogto xittaa haddii odayga ay is qilaafaan , waayo joogitaankeeda waxa ay tahay fursad weyn oo uu ku raali gilin karo , balse midda ku deg degta in ay ehelkeeda ama ehelka ninka aado taasi waxa ay ninka ku keeneysaa kaliya madax adeeg waxaana laga yaabaa in ay wiiqdo fursaddii isu soo laabashada.
Jaceylkii Waayo-waayo : haweeneyda uu ninka ku soo guursado jaceyl waqti soo jiimamayay waa ay adag tahay in gacantiisa ay ka baxdo .
Midda Sirta Qarisa : waa midda sirtiisa ilaalisa mana aha midda ku deg degta taleefanka haddii dhib yar uu jiro oo uga sheekeyneysa hooyadeed ama saaxibteeda , waa midda qarisa haddii ay ceeb ku aragto ninkeeda iskuna dayda in ay saxdo .
Midda Dabirka Leh : middaan ragbadan ayaa ku duceysta ,,,waayo caqli ayay ku maamushaa waxii uu ninkeeda u soo helay oo waxa ay ninka u tahay wasiirada maaliyadda , xittaa haddii cariiri dhanka nolosha ah timaado iyada ayaa wax isku jacburisa .
Gabdhaha dabada laga waso sidaan ayaa lagu gartaa…
raaxada galmada dumarka